အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား Video Conferencing စနစ် အသုံးပြု၍ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ‹ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား Video Conferencing စနစ် အသုံးပြု၍ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး
နေပြည်တော် ၊ဇွန် ၁၆
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E.Mr.Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက်၁၀:၀၀နာရီအချိန်တွင် Video Conferencing စနစ် အသုံးပြု၍ အလုပ်သမား ရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေထိုင်နေသော မြန်မာအလုပ် သမားများအား ပြန်လည်ခေါ်ယူရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်တိုးမြှင့်ပေးစေရေး၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာလိုသူများအား Relief Flight များဖြင့် ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေသည့်အခြေအနေများ၊ EPS စနစ် ဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမား များအောင်မြင်သည့် အရေအတွက်ကို လူဦးရေ ၁၀၀၀ မှ ၇၀၀၀ အထိတိုးမြှင့်နို်ငခဲ့သည့် ကိစ္စရပ် များ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားများကို ကိုရီးယားနိုင်ငံ တွင်ဦးစားပေးပြန်လည်ခေါ်ယူအလုပ်ခန့်အပ်ရေး ထိုသို့ခေါ်ယူရန်အတွက် အလုပ်သမားခေါ်ယူရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း တိတိကျကျပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေများ၊ COVID-19 ကာလအတွင်း EPS အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများကျင်းပရာတွင် နည်းပညာအသုံးပြု၍ ကြိုတင် ဆန်းစစ်ထားနိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး၊ EPS ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများအား ပြန်လည်ခေါ်ယူရေး အတွက်လေကြောင်းလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် အခက်အခဲများ အားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသည့် ကဏ္ဍများအနက်မှ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမားများ၏ အကြပ်အတည်းများ အားနည်းပညာအသုံးပြု၍ ကျော်လွှားဖြတ်သန်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်နှင့် Covid-19 ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင် ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ လူမှုဖူလုံရေး အကျိုးခံစားခွင့်များ နှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့် ကောက်ခံထားခြင်း မရှိသေး သည့်အတွက် အလုပ်သမားများအား အဆိုပါ ခံစားခွင့်အနေဖြင့် ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် အလုပ်ရှင်/ အလုပ်သမားများ၏ အခက်အခဲကိုရှေးရှု၍ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် Covid-19 ကာလအတွင်း နိုင်ငံသားများနှင့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အခွန်အခလျော့ချပေးခဲ့မှုများနှင့်ဝန်ကြီးဌာန မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုရီးယား နိုင်ငံသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင် များ ပူးပေါင်း၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင်၊ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိသည်။